PES CLUB MANAGER 2.3.3 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.3.3 လြန္ခဲ့ေသာ6ရက္က
ဂိမ္းမ်ား အားကစား ဂိမ္းမ်ား PES CLUB MANAGER
PES CLUB MANAGER ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
2018-19 ရာသီကကစားသမားအမည်စာရင်းနဲ့ AI အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီးအဆိုပါတိုးတက်ပွဲစဉ်အပါအဝင်အဓိက update ကို!
PES Club Manager ကိုသင့်ရဲ့နည်းဗျူဟာအသိအမြင်နှင့်ရရှိနိုင်အဘယ်သူမျှမကအခြားဘောလုံးဂိမ်းနဲ့တူစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်ကိုစမ်းသပ်ရန်လတံ့သော Pro ကို Evolution ဘောလုံးစီးရီးအတွက်ထူးခြားတဲ့ entry ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာအဝှမ်းမှသန်း 30 ကျော်မန်နေဂျာ join, သင်ကဘုန်းအသရေဖို့သင့်ကလပ်ဦးဆောင်လမ်းပြရန်ကြာသောအရာကိုရရှိပါသည်လျှင်ကြည့်ပါ။
"PRO Evolution ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ 2018" ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းဗားရှင်းအပေါ်မူတည်ပြီး ENGINE
အတှေ့အကွုံတစ် 3D ရှုထောင့်ကနေကိုက်ညီမှုများနှင့်သစ်မှာအင်ဂျင်အားဖြင့် enabled တိုးမြှင့်ဂရပ်ဖစ်ပျော်မွေ့။ တနည်းအားဖြင့်နည်းဗျူဟာရှုထောငျ့မှတစ်ခုချင်းစီကိုပွဲစဉ်ဖြစ်ရပ်ခွဲစိတ်ဖို့ 2D သို့ပြောင်းပါ။
အသစ်အင်ဂျင်ကိုလည်းကစားသမား Animation နဲ့ပွဲစဉ်ဒိုင်းနမစ်အရင်ကထက်ချောမွေ့ဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုတယ်! ထို့အပြင်ခုနှစ်, ရည်မှန်းချက်အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပ၏ပိုများပါတယ်အစစ်အမှန်ဘဝဘောလုံးပွဲစဉ်အပေါငျးတို့သဒရာမာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုထပ်ဖွထည့်ပြီးပါပြီ။
သင့်ရဲ့အဖွဲ့ဖန်တီးသောအခါ 5000 ကျော်ဘောလုံးကစားသမားလိုင်စင်ကနေရွေးချယ်ပါ။
ဘက်ခမ်း, BATISTUTA, နယ်များနှင့် ZICO အပါအဝင်အတော်များများဒဏ္ဍာရီကစားသမားအဖြစ်ကောင်းစွာ featured နေကြသည်။
(FREE-to-play) Tactical အားကစားဂိမ်း၏စိတ်အားထက်သန် FOR သည်လည်းမြေ FROM မှတည်ဆောက်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲစီမံခန့်ခွဲရေးအတွေ့အကြုံ
ကလပ် Manager ကိုမစိုက်တစ်ခုချင်းစီကိုပွဲစဉ် orchestrate မှဗျူဟာမြောက်-နာမယူဘဲနေဘောလုံးပရိတ်သတ်တွေတစ်ဦးပြည့်စုံပလက်ဖောင်းကမ်းလှမ်းတဲ့နည်းဗျူဟာဘောလုံးဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သူကတောင်ပုံမှန်အရေးယူ-အာရုံစူးစိုက်ဘောလုံးဂိမ်းတွေနဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောသူတို့အဘို့, ကောက်များနှင့်ကစားရန်လွယ်ကူသည်။ အနုပညာအခြားဂိမ်းတွေနဲ့မတူတာကကလပ် Manager ကသင့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှု-အချိန်နှင့်ဘောလုံးကိုထိန်းချုပ်ဆန့်ကျင်အဖြစ်မန်နေဂျာအဖြစ်သင့်ရဲ့ပညာသတိရှိသောဆု။ ရုံဘောလုံးစီမံခန့်ခွဲမှု၏အစစ်အမှန်လောကရှိသကဲ့သို့, ရလဒ်များကိုသင်တစ်ဦးချင်းစီပြိုင်ပွဲဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရန်တစ်ခုချင်းစီကိုပွဲစဉ်၏ဆုတ်ယုတ်ခြင်းနှင့်စီးဆင်းမှုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းပေါ်မူတည်သည်။
နည်းဗျူဟာကိုက်ညီရန်သင့်တွင် TEAM Shape
ကျွမ်းကျင်သင်တန်းဆရာကျုံ့နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး preference ကိုအညီတစ်ဦးချင်းစီကကစားသမားရဲ့လေ့ကျင့်ရေးစစ်အစိုးရစိတ်ကြိုက်။
သင်တို့သည်လည်းဤကဲ့သို့သော "ခေါင်းစီး", "ဖနောင့်လှည့်ကွက်", "Rabona" ​​အဖြစ်အသစ်သော Player ကိုကျွမ်းကျင်မှုကိုအသုံးပြုခွင့်ရှိသည် "အနိမျ့ခနျးကျော်ပြီ", "Malicia" နှင့် "Acrobat ကိုရှင်းလင်းရန်" ပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာဘောလုံးမှကြွလာသောအခါအသီးအသီးမန်နေဂျာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်ရှိပါတယ်, နှင့်ကလပ် Manager ကိုသငျသညျဤပုံဤ၌သင်တို့၏အဖွဲ့သည်ပုံဖော်ဖို့လွတ်လပ်မှုကိုဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုထားသည်။
NEW MODE: "အားလုံး-STAR Series"
Play စမစ်ရှင်များအတွက်တာဝန်ပေးအပ်မျိုးစုံအဖွဲ့များအနေဖြင့်ရွေးကောက်တော်မူ 18 ကစားသမားဖွဲ့စည်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူတိုက်စစ်ပါတယ်။
အားလုံးအသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးချင်းစီအဖွဲ့ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းအစှမျးသတ်တိအကြားနည်းနည်းကွာခြားချက်ရှိပါတယ်သေချာ, တူညီတဲ့ကစားသမားရေကူးကန်ကနေ select လုပ်ပါ။ ကဲ့သို့သောသင်အောင်ပွဲပေါ်ထွက်လာချင်တယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့နည်းဗျူဟာစွမ်းရည်အပေါ်သက်သက်သာအားကိုးဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။
သငျသညျအောင်မြင်ရန်ပိုမိုအောင်ပွဲသည် သာ. ကြီးမြတ်သင်တို့၏အကျိုးမဖြစ်, ဒါကြောင့်ဒီစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသစ်များကိုပြိုင်ပွဲမှာသင်၏လက်ကိုကြိုးစားရန်သေချာစေမည်။
သင့်ကိုယ်ပိုင် PACE ကို AT ရာသီ LEAGUE ပျော်မွေ့
ရာသီလိဂ်ပြက္ခဒိန်သင်သည်ပွဲစဉ်ပြီးမြောက်ရန်အချိန်ရှိသည်သည့်အခါတိုးတက်မှုသာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်, ဆိုလိုတာကလုံးဝသင့်ရဲ့အချိန်ဇယားကိုဗဟိုပြု။ fixed ရက်စွဲများသို့မဟုတ်အဆစိုးရိမ်မရှိဘဲသင်၏ကိုယ်ပိုင်နှုန်းထားမှာရာသီပျော်ရွှင်ခံစားပါ!
တစ်ဦးကကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းကိုအခမဲ့-to-play ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ GAME
စစ်မှန်သောဘောလုံး-နည်းဗျူဟာများအတွက်ကန့်သတ်အဖွဲ့သည်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အတူအနိုင်ရမယ့်အောင်ပွဲထက်ချိုဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာအနိုင်ရလိဂ်နှင့်ခွက်ကိုခေါင်းစဉ်ကသင်သိသိသာသာသင့်ရဲ့အဖွဲ့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်ခွင့်ပြုဆုလာဘ်ဝင်ငွေအဖြစ်သို့သော်ရှည်လျားများအတွက်ကန့်သတ်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဤလျှောက်လွှာကိုတစ်ဦးအခမဲ့-To-Play အွန်လိုင်းဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ play ရှေ့တော်၌ထိုစက်ကိုအင်တာနက်ချိတ်ဆက်ကြောင်းသေချာပါစေ။
လိုက်ဖက်တဲ့ OS ကို: အန်းဒရွိုက် 4.2.0 သို့မဟုတ်နောက်မှ
* ဒီဂိမ်းစွမ်းဆောင်ရည်အထက်ပါစာရင်းထဲတွင်မပါဝင်ပါဆိုပစ္စည်းတွေထဲမှာ run ဖို့အာမခံထားခြင်းမရှိပါ။
* ဒီဂိမ်းအထက်ပါစာရင်းထဲတွင်မပါဝင်ပါဆိုကိရိယာများပေါ်တွင် run ဖို့အာမခံချက်မပေးပါ။
လိုင်စင်စာရင်း URL ကို
PES CLUB MANAGER အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
PES CLUB MANAGER အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
I like this thank you admin
PES CLUB MANAGER အား အခ်က္ျပပါ
webxmasterx စတိုး 1.13k 474.27k
PES CLUB MANAGER ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း PES CLUB MANAGER အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.3.3
Release date: 2019-06-12 07:06:42
လက်မှတ် SHA1: E9:23:18:92:F7:E6:3D:32:C6:9A:34:16:C1:47:1B:AD:34:10:03:37
PES CLUB MANAGER APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ